आजदेखि तीन दिनसम्म मौसममा बदली हुने! – Nayadhar
उच्च सावधानी अपनाउन अनुरोधः
आजदेखि तीन दिनसम्म मौसममा बदली हुने!
बिहिबार, जेठ १३, २०७८ | १३:२८:३५ |
काठमाडौं । आजदेखि ती दिनसम्म देशभरको मौसममा बदली आउने भएको छ ।
पश्चिम बङ्गालको खाडीमा विकसित भएको चक्रवात ‘यास’का कारण आज जेठ १३ गतेदेखि १५ गतेसम्म देशका धेरैजसो भागमा पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले नागरिकलाई विशेष ध्यान दिन र आवश्यक तयारीमा रहन सरोकारवाला निकायलाई अनुरोध गरेको छ । अहिले उक्त चक्रवात समुद्रबाट जमीनतर्फ प्रवेश गरी उत्तर–पश्चिम सर्ने क्रममा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
त्यसले केही दिन मौसममा असर पार्ने हुँदा सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरिएको प्राधिकरणका प्रमुख अनिल पोखरेलले जानकारी दिए ।
यस्तै विपद्को समयमा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, महिला तथा बालबालिकालाई विशेष ध्यान दिन भनेको छ । यस्तै पर्वतारोहणका लागि हिमालतिर गएको टोलीलाई फिर्ता बोलाउने पनि प्राधिकरणले अनुरोध गरेको छ ।